Atao Loha Laharana ny Fitoriana
NILAZA tamin’ny fianakavian’ny Betela maneran-tany ny Filan-kevi-pitantanana, tamin’ny alarobia 23 Septambra 2015, hoe hisy zavatra maromaro hiova amin’ny fomba fiasan’ny fandaminana mba hahafahana mampiasa tsara ny fanomezana voaray. Izao no nohazavaina tamin’ny fampandrenesana avy amin’ny Filan-kevi-pitantanana, tamin’ny asabotsy 3 Oktobra 2015: “Asaina ‘mamantatra tsara izay zava-dehibe kokoa’ isika ao amin’ny Filipianina 1:10. Manaraka an’io torohevitra io izahay [anisan’ny Filan-kevi-pitantanana] ka tianay raha izay asa tena hahasoa ny vahoakan’Andriamanitra eo amin’ny lafiny ara-panahy sy tena hampandroso ny fitoriana maneran-tany no hatao loha laharana.”
Nanome fanazavana misimisy kokoa tao amin’ny Tele JW i Stephen Lett, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana: “Noresahin’ny Filan-kevi-pitantanana hoe tokony hatao loha laharana ny asan’ilay Fanjakana eny amin’ny saha. Izany no nahatonga anay nandinika raha misy fiovana azo atao mba hampihenana ny vola lany ao amin’ny sampana, mba ho betsaka kokoa ny vola ampiasaina eny amin’ny saha. Nahena na nofoanana mihitsy àry ny asa sasany ao amin’ny Betela. Lasa vitsy kokoa ny Betelita, noho izany.”
Betelita 5 500 teo ho eo àry no notendrena ho eny amin’ny saha, nanomboka tamin’ny Septambra 2015, ka betsaka no tsy maintsy nanao fanovana be teo amin’ny fiainany. Hita anefa hoe notahin’i Jehovah izy ireo, ary nitombo be koa ny asa fitoriana sy fampianarana.
Notendrena ho eny amin’ny saha ny mpivady Betelita iray any Sri Lanka. Nohararaotin’izy mivady izany mba hanaporofoana amin’i Jehovah hoe mino azy izy ireo ary matoky ny fandaminany. Hoy izy mivady: “Tsy fantatray hoe hanao ahoana ny fiainanay, fa ny azonay antoka dia hoe tsy hanary anay i Jehovah. Nivavaka àry izahay hoe: ‘Jehovah ô, mba ampio izahay hanao fanovana mba hahafahanay manao mpisava lalana maharitra, na inona na inona mitranga.’ Tsy dia nanam-bola izahay nandritra ny iray volana voalohany. Tsapanay anefa hoe tia sy nikarakara anay i Jehovah. Efa manana fidiram-bola tsy tapaka izahay izao. Feno be ny fotoananay satria eo ny raharaha, ny asa fivelomana, ary ny asan’ny mpisava lalana. Hainay tsara anefa ny mandamina ny fotoananay satria efa zatra an’izany izahay tao amin’ny Betela. Ny manampy olona hahalala ny fahamarinana no mahafa-po indrindra, dia faly izahay hoe afaka manao an’izany satria mpisava lalana.”
Mianatra fiteny hafa ny Betelita sasany voatendry ho eny amin’ny saha, any Kolombia. Mifindra any amin’ny toerana lavitra izy ireo mba hitoriana amin’ny olona any. Tena fitahiana ho an’ny fiangonany vaovao ireny rahalahy sy anabavy ireny. Nifindra tao amin’ny fiangonana iray, ohatra, ny mpivady Betelita taloha. Hoy ny mpiandraikitra ny faritr’izy ireo: “Tena mankasitraka ny fanampian’izy ireo ny mpiara-mivory aminy. Lasa nanompo be ny mpitory tao. Nahazo fampiofanana hiandraikitra zavatra be dia be eo anivon’ny fiangonana koa ny rahalahy.” Betsaka amin’ireo Betelita taloha koa no miasa an-tsitrapo any amin’ny Betela, iray andro isan-kerinandro na mihoatra an’izany.
Efa nanompo tao amin’ny Betelan’i Japon nandritra ny 31 taona ny rahalahy iray, ary notendrena ho any amin’ny fiangonana iray tsy misy afa-tsy anti-panahy roa. Nila nohavaozina ny Efitrano Fanjakana ampiasain’izy ireo, ka nanapa-kevitra ny tsy hiasa nandritra ny tapa-bolana izy. Nisy horohoron-tany nirefy 7,0 amin’ny mari-drefy Richter anefa tany Kumamoto, any amin’ilay fiangonana misy azy, taloha kelin’ilay fanavaozana. Afaka nitarika ny fanampiana vonjy rano vaky sy ny fitsidihana ondry àry izy, satria mbola tsy niasa izy tamin’izay. Hoy izy: “Rehefa mieritreritra an’ilay izy aho izao, dia hitako hoe i Jehovah no nametraka ahy tany amin’ny toerana tena nilana ahy.”
Nanompo tao amin’ny sampan’i Aostralazia i Phil sy Sugar. Hoy izy mivady: “Rehefa nasaina niala tao amin’ny Betela izahay, dia tapa-kevitra fa hataonay tsotra foana ny fiainanay. Nivavaka izahay mba hotarihin’i Jehovah ka hahay hanapa-kevitra ary hotahiny ny fanapahan-kevitray. Te hanompo any an-tany hafa izahay, ka nanao izay vitanay mba ho afaka hanao an’izany. Tena notahiny ny fanapahan-kevitray dia nalaminy ny zava-drehetra mba hahafahanay manompo azy amin’ny fonay manontolo.” Manompo any amin’ny antoko-mpitory miteny anglisy any amin’ny Nosy Samal, any Philippines, izao izy mivady. Misy mpitory 34 sy mpisava lalana maharitra 9 ao. Adiresy 120 eo ho eo izao no mila anaovan’izy mivady fiverenana mitsidika satria misy olona liana. Hoy izy mivady: “Mbola betsaka ny asa mahafinaritra azo atao. Soa ihany izahay fa niantehitra tanteraka tamin’i Jehovah. Tena nampitombo ny finoanay sy ny fitiavanay azy izany.”
Hoy ny anabavy mpitovo iray any Rosia, izay notendrena ho mpisava lalana manokana: “Mpisava lalana aho dia afaka mitory bebe kokoa momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Io no asa lehibe indrindra sady tsy hiverina intsony. Tiako be ilay hoe fitaovana eo an-tanan’i Jehovah aho.” Mitarika fampianarana Baiboly enina izy izao, ary misy amin’izy ireo avy any Irak, Nizeria, Sri Lanka, Syria, ary Zambia.
Zambia: Faly mandray an’ireo Betelita taloha ny fiangonana vaovao misy azy
Maro amin’ny Betelita any Zambia koa no notendrena ho mpisava lalana maharitra. Faly izy ireo satria manompo eny amin’ny saha bebe kokoa. Hoy i Andrew, mpisava lalana miaraka amin’ny vadiny: “Tsy ela taorian’ny nialanay tany amin’ny Betela, dia nanampy olona roa hahay hamaky teny sy hanoratra izahay. Kely sisa dia hanao ny anjarany voalohany amin’ny fivoriana andavanandro ny ankizilahy iray folo taona ampianarinay Baiboly. Nisy mpivady nitorianay koa nanatrika Fahatsiarovana, dia efa mivory foana ry zareo izao. Mandroso be ny fianarany Baiboly. Hitanay hoe tsy ho nisy izany rehetra izany raha tsy nanaraka ny tari-dalan’i Jehovah izahay, nanaiky hampiany, ary nahazo ny fitahiany.”
Mbola mpivady vao i Edson sy Artness, any Zambia, rehefa notendrena ho eny amin’ny saha. Hoy i Artness: “Nampiofana anay hahay hitsitsy ny vola kely raisinay ny fiainana tao amin’ny Betela ary nampianatra anay tsy hidi-trosa sy ho faly foana. Tsy nanenenanay mihitsy ny nanompo tao amin’ny Betela. Lasa hainay hoe ahoana no ampifanarahana ny tanjonay ara-panahy amin’ny zava-misy ary nianatra niantehitra tamin’i Jehovah izahay rehefa nanatratra azy ireny. Nitombo ny finoanay an’i Jehovah, dia vonona ny tsy hivadika aminy mihitsy izahay.”